Home Wararka Maxaa keenay dib u dhaca shirkii Teendhada ee loo balansanaa?
Shirkii arrimaha doorashada ee lagu waday in uu shalay oo khamiis ahayd ka furmo Muqdisho, ayaa u dhacay sabtida kadib markii aanay wada imaanin madaxda maamul gobaleedyada .
Illa iyo hadda madaxda soo gaartay caasimadda waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur galbeed iyo Jubbaland, halka saacadaha soo socda la filayo madaxweynaha Puntland Saciid Deni in uu soo gaaro magaalada Muqdisho.
Dhanka kale waxaan la ogeyn imaanshiyaha madaxweynaha maamul gobaleedka Hirshabeelle, oo khalalaaso ay ka dhaceen deeganadiisa , taas oo dad badan ay ku nafwaayeen.
Sida MOL aay ogaatay waxaa weli lagu heshiin la’ayahay ajendaha shirka kaasoo weli aay galaangal ku dhex leedahay Villa Somalia, Madaxweynaha Jubbaland ayaa ka digay in la carqaladeeyo shirka, wuxuuna sheegay “Haddii uu shirka noqdo mid ka madax bannaan Villa Somalia, wuu guuleysanayaa dalkana Doorasho ayuu aadayaa, balse waxaa looga fadhiyaa RW Rooble in uu qaato kaalinta looga baahan yahay iyo in uu dhexdhexaad ka noqdo dhinacyada aay ka dhexeeyso in dalka aay Doorasho ka dhacdo” Ayuu yiri mar uu u waramayay Idaacadda BBC.
Dad badan ayaa shaki ka qaba in Farmaajo uu hadda u isticmaalayo Senatar Cabdi Qeybdiid in uu noqdo shaqsigii uu ku fashilin lahaa shirka, waxaana xogta aan helnay aay sheegeysaa in uu jiro is afgarad dhex maray Farmaajo, Qoor Qoor iyo Cabdi Qeybdiid.